Wasiir Goodax Bare oo u jawaabay Xildhibanno ka hadlay in la xiro dugsiga sare ee 15 May ee ay gacanta ku haysay Masar? – Kalfadhi
Wasaaradda Waxbarashada ee Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib ula wareegi doonto dugsiga sare ee 15 May oo ay gacanta ku hayaan ergada waxbarashada Masaarida ee Soomaaliya.
Ergada Masaarida ayaa dugsigaasi waxa ay gacanta ku hayeen tan iyo sanadkii 2015-kii markaas oo maamulkiisa lagu wareejiyay.
Wasaaradda Waxbarashada ee Soomaaliya ayaa sheegtay in loo baahday iskuulka si loogu badallo dugsiga tababbarka macalalimiinta gabdhaha, kaas oo soo saari doona hablaha macalimiinta ka noqon doona dugsiyada hoose iyo dhexe ee waddanka.
Wasiirka Waxbarashada Cabdillahi Goodax Barre oo wareysi siiyay BBC-da ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay war ay barahooda bulshada ku qoreen xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee Federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo sheegayay in sababta dawladdu ula wareegtay dugisga 15 May ay ka dambeysay amar uga yimid dawladda Itoobiya.
Wasiir Goodax ayaa mar uu umuurtaasi ka jawaabayay waxa uu yiri: “Waan arkaayay [baraha bulshada] iyo [baraha internet-ka] arrimaha Soomaalida ka hadlo xildhibaanno ka hadlaayo, aniga xildhibaannadaas, xildhibaanno siyaasadda ka dhacay oo dowladnimada iyo wadaniyadooda ay aad u hoosayso ayaan aaminsanahay inay yihiin”. ayuu yiri Goodax Barre.
“In go’aan iskuul ku yaal Xamar oo aan dadkeenna ugu danaynayno oo aan howlaheenna ku qabsanayno ay yiraahdaan dowladda amar ayaa meel laga soo siiyay waa u wadaninimo xumo waana u dadnimo xumo. Waxay rabaan oo kale ha sameeyaan laakiin inay tacliinta siyaasadeeyaan waa u dadnimo xumo.”
Haddaba xildhibaannadaas waxaa ka mid ah xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Federaalka ee Soomaaliya kaas oo bartiisa Facebook-ga soo dhigay farriin uu ku dhaleecaynayo amarka dowladda ee dugsiga sare ee 15-ka May looga wareejinayo dowladda Masar.
“Amar lagu raali gelinayo Itoobiya oo lagu xiray Iskuulkii 15 May ee dowlada Masar maamuleysay, ardayda dhigatana lacag la’aan wax lagu bari jiray!” ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad.
“Horay hadii Qalbi Dhagax loogu dhiibay. Dekadihii dalka lagu wareejiyay. Qaraarkii Jaamacada Carabta ee dowlada Soomaaliya horay u taageertay amarkooda looga laabtay. Diyaradoodii dalka meeshii ay rabto maalin walba ka degayso kuwii kaloo xayiran. Maantana Iskuuladii amarkooda lagu xirayo, tolow maxaa haray?!”
Wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa waxa ay horraantii bishan soo saartay codsi ay ku dalbanaysay in maamulka dugsigaas lagu soo wareejiyo wixii loo gaaro 30-ka bisha Abriil ee soo aaddan. Xigasho BBC Soomaali